Ama-FAQ - I-AOOD Technology Limited
Uyini umehluko wezindandatho zokushelela nezinyunyana ezijikelezayo?
Zombili izindandatho ezishelelayo nezinyunyana ezijikelezayo zisetshenziselwa ukudlulisa imidiya isuka engxenyeni ejikelezayo iye engxenyeni emile ngenkathi ijikeleza. Kepha imithombo yezindaba yamasongo okushelela ingamandla, isignali nedatha, imidiya yezinyunyana ezijikelezayo ingamanzi negesi.
Kuthiwani ngewaranti yemikhiqizo ejikelezayo kagesi ye-AOOD?
I-AOOD inewaranti yonyaka yayo yonke imikhiqizo ejikelezayo kagesi ngaphandle kwamasongo amasiko. Uma noma iyiphi iyunithi ingasebenzi kahle ngaphansi kwendawo ejwayelekile yomsebenzi, i-AOOD izoyigcina noma iyishintshe mahhala.
Ungayikhetha kanjani imodeli yesiliphu esifanele sohlelo lwami lokusebenza?
Inani lamasekethe, amanje nogesi, i-rpm, umkhawulo wosayizi uzonquma ukuthi iyiphi imodeli yendandatho yesiliphu edingekayo. Ngokwengeziwe, sizobheka isicelo sakho sangempela (ukudlidliza, isikhathi sokusebenza esiqhubekayo nohlobo lwesiginali) bese sikwenzela ikhambi eliqondile.
Kungani kufanele ngikhethe i-AOOD TECHNOLOGY LIMITED njengomlingani wethu wesiliphu? Yini inzuzo yakho?
Inhloso ye-AOOD ukwanelisa amakhasimende. Kusuka ekwakhiweni kokuqala, ukukhethwa kwezinto ezibonakalayo, ukukhiqizwa, ukuhlolwa, iphakethe nokulethwa kokugcina. Sihlala sinikela ngezinsizakalo ezihamba phambili futhi siqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu angathola imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngesikhathi esifushane.
I-AOOD izoyivimba kanjani i-slip ring ekuphazamisweni kwesiginali?
Onjiniyela be-AOOD bazovimbela ukuphazanyiswa kwesiginali ezintweni ezingezansi: a. Khulisa ibanga lamasongo wesiginali namanye amasongo wamandla kusuka ngaphakathi kwelenge. b. Sebenzisa izintambo ezikhethekile ezivikelekile ukudlulisa amasiginali. c. Faka isihlangu sangaphandle samasongo ezimpawu.
Sithini isikhathi sokulethwa kwe-AOOD uma kufakwa i-oda?
Sinezinqwaba zesitoko ezinengqondo zamasongo amaningi ajwayelekile, ngakho-ke isikhathi sokulethwa imvamisa singaphansi kwesonto elilodwa. Kumasongo amasha amasha, sidinga amaviki ama-2-4.
Ngingayifaka kanjani indandatho eshibhile nge-bore?
Imvamisa siyifaka ngokufakwa shaft bese usetha isikulufa, singangeza i-flange ukufanisa ukufakwa kwakho uma udinga.
Ohlelweni lwe-dual-band 2-axis digital marine satellite antenna system, ungancoma ezinye izixazululo ezifanelekile zezindandatho?
I-AOOD inikele ngezinhlobo eziningi zamasongo ashelelayo wezinhlelo ze-antenna, kufaka phakathi amasistimu ama-antenna asolwandle kanye nezinhlelo ze-antenna zomgwaqo. Ezinye zazo ziyadingeka ukudlulisa isignali yemvamisa ephezulu futhi ezinye zazo zidinga iziqu zokuvikela eziphakeme, ngokwesibonelo i-IP68. Sonke sikwenzile. Uyacelwa ukuthi uthinte i-AOOD ngezidingo zakho ezinemininingwane yezilayidi.
Ngokwanda kobuchwepheshe obusha, kudingeka izindandatho ezithuthuke kakhulu ukuze kudluliswe amasiginali akhethekile. Yiziphi izimpawu ezingadluliselwa ngamasongo e-AOOD?
Ngolwazi lwe-R & D nokusebenzisana kweminyaka, izindandatho ze-AOOD zidluliselwe ngempumelelo zilingisa isignali yevidiyo, isignali yevidiyo yedijithali, imvamisa ephezulu, ukulawula kwe-PLD, i-RS422, i-RS485, i-Inter Bus, i-CanBus, i-Profibus, i-Device Net, i-Giga Ethernet njalonjalo.
Ngifuna iringi eshelelayo ukuze ngidlulise i-1080P nezinye iziteshi ezijwayelekile zamasignali ngesakhiwo esincane. Ungakwazi ukunikela ngento efana nayo?
I-AOOD ithuthukise izindandatho ze-HD zamakhamera we-IP namakhamera we-HD ezingadlulisa zombili isignali ye-HD namasiginali ajwayelekile kuhlaka lwe-compact capsule slip ring.
Ingabe unokuthile okungadlulisa i-2000A noma yamanje yamanje?
Yebo sinakho. Izixhumi ezijikelezayo zikagesi ze-AOOD zisetshenziselwa nje ukudlulisa umbala ongemuva: # f0f0f0; high current.
Uma i-slip ring idinga i-degree ephakeme yokuvikela, njenge-IP66. Ngabe i-torque izoba nkulu?
Ngobuchwepheshe obuthuthukile nokwelashwa okukhethekile, i-AOOD ingenza iringi eshelelayo hhayi i-IP66 kuphela kepha ne-torque encane enhle. Ngisho nendandatho yesilayidi enkulu, siyayivumela ukuthi isebenze kahle ngokuvikelwa okuphezulu futhi.
Ngephrojekthi ye-ROV, sidinga amalunga ambalwa wokujikeleza angadlulisa isignali ye-fiber optic eyodwa namandla ngaphansi kolwandle olujulile. Unganikela ngento enjalo?
I-AOOD inikeze ngempumelelo amalunga amaningi ajikelezayo ama-ROV nezinye izinhlelo zasolwandle. Okwezemvelo yasolwandle, sihlangana ngokuhlangana kwe-fiber optic rotary ku-slip kagesi, ukudlulisa isignali ye-fiber optic, amandla, idatha kanye nesiginali kumhlangano owodwa ophelele. Ngokwengeziwe, sibheka ngokuphelele isimo sokusetshenziswa, izindlu zesilayidi ziyokwakhiwa ngensimbi engagqwali, isinxephezelo sengcindezi kanye nekilasi lokuvikela i-IP68 nayo izokwamukelwa.
Sawubona, iqembu lethu lidizayina iphrojekthi eyirobhothi, sidinga amalunga amarobhothi wokujikeleza ukuxazulula izinkinga zekhebula, ungazise ongakwazi ukukwenza.
Ekusebenziseni i-robotic, i-slip ring yaziwa njengerobhothi elijikelezayo noma elijikelezayo lamarobhothi. Isetshenziselwa ukudlulisa isignali namandla kusuka kuhlaka lwesisekelo kuya kuyunithi yokulawula ingalo ye-robotic. Inezingxenye ezimbili: ingxenye eyodwa emile ibekwe engalweni yamarobhothi, futhi ingxenye eyodwa ejikelezayo inyukela esihlakaleni samarobhothi. Ngokuhlangana kwerobhothi ngokuhlanganyela, irobhothi lingafinyelela ukujikeleza okungapheli okungama-360 ngaphandle kwezinkinga zekhebula. Ngokuya ngemininingwane yamarobhothi, amalunga we-robotic rotary ahluka kakhulu. Imvamisa irobhothi eliphelele lizodinga amasongo amashelethi amarobhothi futhi lezi zinsimbi zingaba nezidingo ezihlukile. Kuze kube manje, sesivele sinikeze izindandatho ze-compact capsule slip, ngamasongo ama-bore slip, amasongo e-pan cake slip, amalunga we-fiber optic rotary, amalunga we-electro-optic rotary kanye nezixazululo ezijwayelekile zerobhothi.
Isixazululo sakho se-slip ring sizwakala sihle, kepha yiziphi izivivinyo ozozenza? Uqhuba kanjani?
Kwemihlangano ejwayelekile yesilayidi, efana ne-AOOD usayizi omncane we-compact slip slip, sizohlola i-voltage yokusebenza neyamanje, isiginali, i-torque, umsindo kagesi, ukumelana nokuqina, amandla we-dielectric, ubukhulu, izinto ezibonakalayo nokubukeka. Okwezindinganiso zempi noma ezinye izindandatho ezikhethekile zemfuneko ephakeme, njengejubane eliphezulu futhi lezo zizosetshenziswa ezimotweni ezingaphansi kwamanzi, ezokuvikela nezamasondo ezisindayo zemishini, sizoqhuba ukushaqeka kwemishini, ukuhamba ngebhayisikili lokushisa, ukushisa okuphezulu, ukushisa okuphansi, ukudlidliza, umswakama, ukuphazamiseka kwesiginali, ukuhlolwa kwejubane eliphezulu njalonjalo. Lezi zivivinyo zizohambisana namazinga ezempi ase-US noma izimo zokuhlola ezicacisiwe ngamakhasimende.
Yiziphi iziliphu ze-HD-SDI onazo? Sidinga ezinye eziningi zazo.
Okwamanje, sinamasongo e-12way, 18way, 24way kanye ne-30way SDI. Zihlangene futhi zakhiwe kalula. Baqinisekisa ukudluliswa kwesiginali ngokushelelayo kwamavidiyo encazelo ephezulu futhi bangahlangabezana nezidingo zohlelo lokusebenza lwe-TV nefilimu.